05/06/2018 - Page 2 sur 4 -
Tratra ny tanjona : Miandry ny sezany ireo depiote mpitokona
Efa nandrahona ny hanangana governemanta vaovao ireo depiote mpitarika ny fitokonana etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai androany maraina, raha toa ka tsy nanao ny fanendrena ny Filoham-pirenena. Mbola nolazaina tao anatin’ny fandrahonana ihany koa fa …Tohiny
Antsiranana : Mpivady karàna maty nisy namono tao an-tranony
Mpivady karana no hita faty teo amin’ny lavarangan’ny tranony tany Antsiranana omaly tokony ho tamin’ny 05 ora maraina. 70 taona ilay rangahy raha toa ka 60 taona ilay ramatoa vadiny. Mbola hita tsy lavitra ny …Tohiny
Fandorana fiaran’ny Telma tany Mandoto : Anjatony ireo fokonolona no efa nandalo famotorana
Anjatony ireo olona efa nandalo famotorona tamin’ny fandorana ny fiaran’ny Orinasa Telma tao amin’ny kaomina Fidirana Distrika Mandoto. Maro no voarohirohy satria dia karazana fitsaram-bahoaka no niseho nandritra ny fandorana ireo fiara miisa roa ireo. …Tohiny
Teratany vahiny tsy manan-tsata : Mahajanga sy Fianarantsoa ary Toliara no ahitana azy ireo
Isan’ireo firenena ahitana olona tsy manan-tsata, na tsy manana « nationalité » i Madagasikara. Hatreto mbola tsy fantatra mazava ny tena isan’ireo olona ireo noho izy ireo miafina noho ny tahotra haondrana amin’ny firenena hafa. Marihina fa …Tohiny
Ankoatra ny fimenomenoman’ny besinimaro amin’ny fiakaran’ny sarandalan’ny taksibe ho 500 Ar eto an-drenivohitra sy ny manodidina, mampiteraka resabe sy mampimenomenona ny olon-tsotra maro sy ireo mpanao politika ihany koa ny fanatanterahana ny fifidianana Filoham-pirenena ny ...Tohiny